Maxay tahay mudnaanta Xildhibaan Mahad Salaad? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay tahay mudnaanta Xildhibaan Mahad Salaad?
Maxamed Cabdullaahi Dhaaley, oo ka mid ah dhallinyarada aqoon yahanka ah ee qoraallada cuddoon ku cabira aragtidiisa ku aaddan arrimaha Siyaasadda ayaa qoraalkaan gaaban kaga hadlaya mudnaanta Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taariikhdu waxa ay dhowr jeer imtixaan isku mid ah marsiisaa dadka iska illooba oo aan qiimo siinin guusha ka dhalata halgankooda. Waxa ay dadkaas ku qasbanaadaan in ay mar iyo marar kale la kufaa-kacaan caqabad ay isu qabeen inay hadda ka hor ka soo gudbeen. Haddii aan si kale u dhaho, dadka dammiinka ah ee dhaqso u illooba casharradii ay taariikhdu bartay, waxay dib ugu laabtaan galaas ay mar hore ka soo barmooseen, weligoodna ka ma qalinjebiyaan dugsiga nolosha– mid siyaasadeed iyo mid bulshoba.
Arrintaan waxaa hore ugu suntanaa ummadda ku nool dhulka Koonfur ka soo xiga Gaalkacyo. Waxay hadda ka hor dayaceen mirihii laga dhaxlay halgankii xaq-u-dirirka ahaa ee lagu riday keligiitaliyaha. Nasiibdarro, waxa ay gefkaas dartiis ku qasbanaadeen inay mar kale hubka u qaataan ka-hortagga keligiitalisnimo tii hore ku dayanaysa oo ka dhigan taariikhda oo kuwii fududeystay ku soo rogaalcelisay.
Hadda oo mar labaad si guul ah oo weliba sidii hore ka fudud kana ilbaxsan looga gudbay tijaabadii 25-kii Abriil ee sannadkaan la maray, waxaa muuqata saansaanta maahsanaan iyo miyiribeel dib loogu laabanayo, waxaana taas caddeyn u ah in ay maanta bulshadii shalay masiirkeeda lagu muransanaa oo noloshooda iyo nabadgaliyadooda halista loo galiyay damac xukun jacayl ah dartiis ay kalsoonideeda iyo metelaaddeeda si garba-siman ah ugu loolamayaan raggii badbaadinteeda u istaagay iyo kuwii boqna-goynteeda u alalaasayay.
Xafladdii uu caawa Mahad Salaad ku soo bandhigay waxqabadkiisa waxaan ka helay raynrayn igu soo noolaysay rajo beryahaan iga dhinsanayd. Waxaana munaasabaddaas ka dheggeystay khudbado ay jeedinayeen miiddii iyo madaxya-weyntii bulshada, kuwaas oo uu qiimo ugu fadhiyay kuna celcelinayay xusuusta halgankii Badbaado Qaran oo uu Mahad ku maamuusan yahay.
Ma ihi dadka u codeyn doona kursiga uu Mahad u tartamayo, mana ihi qof ay shakhsi ahaan isku yaqaannaan xildhibaanka. Laakiin waxaan codkeyga siiyay oo uu hore iyo haddaba iigu metelay mabda'ii uu u taagnaa ee ahaa ka-hortagga damacii doqonnimada ku dhisnaa ee haddii aanan la is hortaagi lahayn uu Farmaajo ku hallaagi lahaa dawladnimada Dalka.
Guul ayaan u rajaynayaa halgamayaashii fara-ku-tiriska ahaa ee halista u soo qaatay dadaalkii lagu suurtogaliyay in doorashada Dalka ay noqoto tartan aanan la kala xigin oo uu isku-daygu u furan yahay inta ordaysa, kuwa socda iyo qaarka gurguurtaba. Haddii ay awal ahayd "ma Farmaajaa ku wata?", hadda fadliga Alle, oo lagu kaabay natiijada halgankii uu Mahad kaalinta ku lahaa ayaa wuxuu halkudhiggu isu beddelay "ninba taagtiis midba tabartiis".